Ny Fisandratan’ny Podemos, Antokon’ny Olom-pirenena Ao Espaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2014 21:57 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, Español
Sary nalaina tao amin'ny kaonty Facebookn'ny antoko “Podemos”.
Hoan'i Espaina, ny vaovao lehibe tamin'ny fifidianana Eoropeana dia ny fidirana manetriketrika nataon'ny “Podemos” (@ahorapodemos) (Vitantsika) teo amin'ny sehatra politika, antoko politika natsangana efa-bolana lasa izay, ary tantanin'ilay manana herim-panahy (karismatika) Pablo Iglesias, profesora ao amin'ny Oniversite Complutense ao Madrid. Manana fandaharan'asam-pifidianana nangonina avy amin'ireo hetsika ara-tsosialy tamin'ny fanoherana ny politikan'ny fitsitsiana ny Podemos, nahavita nitàna ny laharana fahaefatra eo amin'ny hery politika matanjaka ao amin'ny firenena i Pablo Iglesias.
Fivoriana miaraka amin'i Pablo Iglesias, lehiben'ny Podemos, ao Madrid – sary avy amin'i Diagonal. Nahazoan-dalana.
Ny vokatry ny fifidianana Eoropeana notontosaina tamin'ny 25 mey 2014 lasa teo dia voamariky ny tsy fandraisana anjara nifidy sy ny fisongadinan'ny antoko nasionalista ankavanana. Manoritsoritra talaky maso mampalahelo ny fisongadinan'ny antoko mahery fihetsika (extremista) ao amin'ny firenena tahaka an'i Frantsa nandresen'ny Front National (FN) tamin'ny fifidianana, tao Holandy izay nahitana ny fahazoan'ny antoko mankahala Miozolomana vahana, tao Danemarka, Finlandy, Italia ary Hongria,
Ao Espaina, na dia niverina nitarika tamin'ny voka-pifidianana Eoropeana aza ny Antokom-Bahoaka (Partido Popular), ny PSOE, vondrona sosialy-demaokraty no mbola mitana ny laharan'antoko faharoa matanjaka ao amin'ny firenena, dia nivohitra tsy misy toy izany hatramin'izay teo amin'ny rafitr'antoko politika-roa ny krizy. Sambany teo amin'ny tantara demaokratikan'i Espaina izany hoe ny atsasaky ny vaton'ny mpifidy ihany no azon'ireo antoko roa lehibe ireo. Tena zava-dehibe tokoa izany manoloana ny fifidianana ankapobeny izay hotontosaina amin'ny taona hoavy ao amin'ny Sarinosy Iberiana.
Manomboka amin'ny hiakan'ny indignados (tafintohina) hoe “eny azo atao izany” hatramin'ny hoe “Vitantsika io”, dia misy dingana iray (vita). Maneho ny fahamatoran'ireo fihetsiketsehana sy hevi-baovao nentina nibodoana ireo arabe tao Espaina nandritra izay taona vitsy izay ny antoko. Na dia mitsipaka ny fandovàna ny hetsika indignado (tafintohina) aza ny lehiben'ny antoko, sarotra ny mody tsy mahalala ny fifandraisana eo amin'ny antoko vaovao sy ny hetsika manohitra ny krizy. Ny tolo-kevitry ny Podemos izay tena fantatry ny tanora ankoatra ny hafa dia ny fametrahana karama farany ambony indrindra sy ny karama fototra iraisana, fandehanana misotro-ronono mialoha kokoa, fampihenana ny ora fiasana ho 35 ora isan-kerinandro ary fiarovana tsara kokoa ny mpiasa manoloana ny fandroahana.
Sary nalaina tao amin'ny pejy Facebookn'ny Imagen tomada de la cuenta “Podemos”.
Ny tanjona dia ny handravana ny politikan'ny fitsitsiana napetrak'ireo governemanta samihafa teo amin'ny fitondrana. Anisan'ireo fototry ny fandaharan'asan'ny antoko ny fanamafisana sy ny fampitomboana ny zon'ny olom-pirenena mikasika ny fandraisana anjara ara-politika, ny fampianarana, ny trano fonenana, ny fahasalamana sy ny ady amin'ny kolikoly. Naneho ny fanohanany izany fepetra izany tamin'ny alalan'ny latsa-bato, hetsika an-dalambe sy amin'ny aterineto ny olom-pirenena.
Anisan'ireo lakile amin'ny fahombiazan’ity antoko ity,izay nahazo vato 11,29% tamin'ny Alahady lasa teo ny fahaizany mifandray amin'ny olom-pirenena. Novatsiana ara-bola tamin'ny alalan'ireo hetsika fanangonam-bola isan-karazany ny “Podemos”, antoko manana mpanaraka be indrindra ao amin'ny tambajotra sosialy, raha oharina amin'ireo antoko roa lehibe, kanefa antoko niforona vao haingana : manana mpanaraka maherin'ny 189 000 ny Podemos, raha toa ka 141 000 ny an'ny antokom-bahoaka “Partido Popular” ary 140 000 ny an'ny PSOE.
Tamin'ny alalan'ny diezy Twitter #Podemos25M, niresaka momba ny voka-pifidianana tsy nampoizina tamin'ny fifidianana Eoropeana ireo mpisera Twitter. Ny sasany aza miaraka amin'ny fihetseham-po mahita fiovàna sahady:
Tsy nomena lanjany ny #Podemos25M. Tahaka ny nanamaivanana ny 15M. Hitanareo tsara ankehitriny ny fomba fanomezan-danja ataon'ny tsirairay eo amin'izy ireo ary manome soso-kevitra azy ireo.
Ny sasany kosa naneho ny fientanam-pony tamin'ny Alahady heriny:
Mahatsiaro ho olom-pirenena tanteraka aho. Amin'izao fotoana izao indrindra, afaka hiova ny zava-drehetra, izao no tena fotoana
Tsara andro ny maraina handehanana handatsa-bato hoan'ny #Podemos25M, miaraka amin'ny fanantenana niainako nandritra ny taona maro
Ny sasany kosa nitantara ny zava-niainany nandritra ny latsa-bato:
Lehilahy lehibe iray maherin'ny 70 taona nitady fankatoavana avy aty amiko ary nilaza hoe: mazava loatra fa vitantsika… #Podemos25m
Hoy vamos a llevar la indignación a las urnas, espero que este día se recuerde como el principio del fin del bipartidismo #Podemos25M 🙂
Handeha haneho ny tsy fankasitrahantsika amin'ny alalan'ny latsabato isika anio, manantena aho fa hotsarovana ho toy ny fanombohan'ny famaranan'ny rafitra antoko roa ity andro androany ity
Nahatonga ny antoko nandrombaka seza dimy eo anivon'ny Parlemanta Eoropeana ny fanohanana ny fifidianana sy ny fanohanana antserasera, voka-pifidianana tsy nampoizina raha jerena ny tsy fisian'ny fitaovana sy ny traikefa. Ankehitriny dia hijery imaso akaiky ireo dingana voalohany ho ataon'ny Podemos eo amin'ny sehatra Eoropeana sy ny seha-pirenena ny olom-pirenena sy ireo antoko nifaninana taminy.